Guatemala iyo loolankeeda sidii loo heli lahaa doorka Akadeemiyada ee Maareynta Xuduudaha
Nofeembar, 2011 Cartografia, cadastre, Baridda CAD / GIS
Qeybta Sayniska iyo Teknolojiyada ee San Carlos de Guatemala University waa tusaale wanaagsan oo ku saabsan shaqada ay tahay in akadeemiyadu sameyso si xirfadu u noqoto mid waarta aagga maamulka dhuleed. Tani waa shaqo adag oo badanaa si tartiib tartiib ah u socota, laakiin ka dib dib u eegis ah oo aan sameeyey Saddex sano ka hor, way wanaagsan tahay in la ogaado horumarka ay sameeyeen: iyo waxyaabo kale, fasalkii ugu horreeyay ee qalin-jabiya iyo laba shir goboleed.
Good inay maqlaan ka sha ugu horeysay in posted on goobta: Falanqaynta of koritaanka magaalooyinka iyo isbeddel ah ee isticmaalka dhulka inta lagu jiro mudada 1960-2006, ayaa sidoo kale soo jeedinta asaasi ah unugyada dhuleed ee ugu yaraan afar degmo conurbados la Quetzaltenango (Salcaja, Olintepeque, La Esperanza iyo San Mateo).
Bixinta tacliinta hadda waxaa laga heli karaa oo keliya Xarunta Jaamacadda Galbeedka (CUNOC), laakiin tani sidoo kale way wanaagsan tahay sidaa darteed saameynta bilowga ah ee raasamaalku kama qaadin adkeysiga ay geedi socodka sidan oo kale ah ugu baahan tahay sannadihii ugu horreeyay. Intaas waxaa sii dheer, wada shaqeynta dawladaha hoose ee gobolka ayaa ka dhigaysa shaqooyinkan inay gacan ka geystaan ​​baahida aaggan ee silsiladaha agri-cunto, agribusiness, kheyraadka dabiiciga ee dib loo cusboonaysiin karo, horumarinta reer miyiga, maareynta deegaanka iyo maamulka dhulka.
Ugu yaraan, saddex xirfadlayaasha waxaa soo gudbiya Waaxda Sayniska iyo Tiknoolajiyadda:
Cuntada beeraha ee nidaamka wax soosaarka beeraha
Injineerka maareynta deegaanka deegaanka
Tijaabiyaha Dhulka iyo Tababaraha Dhulka
In the case of saddexaad, iyo in uu leeyahay wax badan in la sameeyo our theme, oo doonaya in la siiyo ardayda fursad ay ku waxbarasho tababar si wax looga qabto arrimaha dalka ka farsamo, bulsho, aragtida sharci, dhaqaale iyo iyo in la hubiyo helitaanka khayraadka aadanaha ku takhasusay, in ay qaataan hawlaha ku lug leh maamulka dalka iyo design, fulinta iyo kormeerka mashaariicda cabbirka, cadastre, maamulka dalka, maamulka dalka, maamulka macluumaadka da'ayeen iyo wax kasta oo mashaariic kale oo horumarineed bulshada iyo dhaqaalaha qaranka.
Naqshadeynta soo jeedinta manhajka sidoo kale waxaa sabab u ah falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan shaqada mihnadlaha sahaminta ee dalal kala duwan oo adduunka ah, iyo isbeddelka ugu dambeeyay ee xirfaddan u beddelay horumarka farsamada iyo dhaqaalaha adduunka. Tani waxay leedahay mudnaan ugu yaraan afar meelood:
Anshaxa bixiya aqoonta aasaasiga ah ee cabbirka, ee sharaxaad ka mid ah oogada dhulka ee heer maxalli ah codsiyada kala duwan sida cadastral, beeraha iyo kaynta sahan, densification network.
Waxay siinaysaa aqoonta horumarinta hantida hantida maguurtada ah iyada oo la tixgelinayo qaybta jirka iyo isweydaarsiga sharci ee qorshaynta horumarinta haboon ee dalka iyo ujeedooyin badan.
Sayniska cabbirka iyo saadaalinta Dunida iyo go'aaminta jagada sheyga ee ku yaal iyo meelaha ku hareeraysan wakhti go'an, iyo sidoo kale daraasaddiisa baaxadeeda.
Sawirqaadir iyo farshaxan fog
Aadaabta anshaxeed ee bixisa aqoonta helitaanka, hannaanka, iyo falanqaynta macluumaadka xaddidan ee anteenooyinka ama sawirrada mawjadaha dhulka, iyo sidoo kale xakamaynta iyo ka shaqeynta sawirrada dhijitaalka ah.
Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed iyo Juqraafi
aagga aqoon anshax ahaan inay garaaf matalaan sida analog oo dusha Earth digital, qraallo si fiican u soo xulay oo amar ku bixiyay in ka database a ama macluumaad suugaan tiro, jidaynayey shaqada maadooyinka.
Waxay bixisaa aqoonta qabtay, kaydinta, qiimaynta, xariirta tiro badan oo ku saabsan waxyaalaha dusha dhulka ee, ku tilmaamayaa in nidaam duwo, codsiga oo ah qalab computer in loo fududeeyo maamulka dabacsan oo isku dhafan, sidoo kale jidaynayey falanqaynta iyo go'aan qaadashada.
Waxaan fursad u helay in aan ka maqlo barafasoorrada iyo dhiirrigeliyeyaasha dhaqdhaqaaqan, horumarka ay ku tallaabsadeen, habka ay u qalabeeyaan shaybaarada iyo aragtiyahooda mustaqbalka qaarkood. Waxay ila tahay shaqo weyn aniga, in kastoo caqabado badan ay jiraan abuurista xaalado dib u dhexgalka shaqaalaha iyo dhacdooyinka siyaasadda gobolka; Waxay ahayd in la arko buuqii ay saraakiisha RIC ka dhex abuureen ardayda markii ay si xamaasad leh ugu sheegeen inay u xaqiijinayaan farsamayaqaanada Cadastre saacado kooban oo tababar ah oo aan lahayn shuruudihii tababarka ee hore.
Iskaashiga Nederland ee loo maro ITC iyo Nuffic ayaa shaqo weyn ka qabtay tan. Waqtigan xaadirka ah, ilaa 30 macallin ayaa horeyba loo tababaray, qaar badan oo ka mid ahi waxay ahaayeen heerka sayidkiisa iyo shaqooyinku waxay ku jiraan saldhig deggan. Baahida loo qabo in la qabto shaqo ka weyn nidaaminta iyo aragtida wixii la gaadhay ayaa la muujiyey; Si aad u bixiso tusaalooyin: ku daabac khadka tooska ah ee khariidadeynta waxqabadyada kordhinta jaamacadda si markaa loo ogaado meesha ay ku yaalliin mashruucyada waxqabadka ee fasal kasta, baaxaddooda iyo wax soo saarkooda; sidan ayaa loo ilaaliyaa sii socoshada, atomization ka ah dadaalada ayaa laga fogaanayaa oo macluumaadku wuxuu noqonayaa mid ka faa'iido badan shuruudaha fudud.
Dadaalka ugu muhiimsan ee muuqaalka caalamiga ah waa Golaha Dhexe ee Maamulka, taas oo la saadaalinayo in lagu gaaro shaqo isku dhaf ah oo ka dhexeysa hay'adaha dawladda, hay'adaha iskaashiga iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay labadii sanaba mar. Aniga oo aan ka baqaynin in aan khaldamo, waxaan u arkaa Guatemala door firfircoon oo gobolka ah, oo leh awood dhexdhexaadnimo oo isu tag ah oo dhaqaajisa issimada si loo mideeyo dadaallada waxa aan runtii u baahanahay oo aan daruuri u ahayn mashaariicda caalamiga ah ee ujeedada wanaagsan leh mararka qaarkood kaliya u muuqda inay leeyihiin rabitaan ah in loo qoondeeyo ilaha dhaqaale ee Mareykanka iyo Yurub.
Sidoo kale jiilka cusub ee qalin jabiyayaashu waxay leeyihiin caqabad adag oo ah inay samaystaan ​​urur firfircoon, kaas oo ku soo duulaya qaybta ganacsiga, adeegyada xirfadeed iyo jahwareerka gobolka. Ilaa iyo inta casriyeynta dowladdu aysan ku adkeysneyn sharciyada bixiya xirfadda maamulka, afartii sanoba hal mar ayaan sii wadi doonnaa inaan aragno isla caadooyinka siyaasad ahaan, shaqaalaheena ugu wanaagsan ayaa lagu go'doomin doonaa shirkadaha gaarka loo leeyahay ama waxay u haajiraan goobo wanaagsan.
Waxaan rajeynayaa in laba sano in ay natiijo la socdaan rajadeyda.
Macluumaad dheeraad ah waxaa laga heli karaa bogga Qeybta Sayniska iyo Tiknoolajiyada.
Meelo badan oo CUNOC ah
Post Previous" Hore Mowduucyo farsamo oo aad u yar oo ku saabsan Shirweynaha Baarista
Post Next Geofumadas ... macno ahaan duulimaadkaNext »